U disk tampoka nandritra ny fampiasana - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>mg>U disk tampoka nandritra ny fampiasana
U disk tampoka nandritra ny fampiasana
U disk tsy afaka manokatra ny fizotran'ny data
Ny fisie ao anaty kapila U dia nanjavona tampoka nandritra ny fampiasana azy, mino aho fa maro ny mpampiasa no sendra ny toe-javatra toy izany, avy eo, ny kapila U Inona no nitranga rehefa nanjavona tampoka ilay dosie? Afaka ho sitrana ve ny rakitra tsy hita ao amin'ny kapila USB? Ity ambany ity dia hiresaka aminao momba ny fomba hamerenanao ireo fisie izay nanjavona tampoka tao anaty kapila U ny fanitsiana.
Inona ny antony mahazatra mahatonga ny fisie eo amin'ny kapila U?
Amin'ny fiaraha-monina maoderina, ny U disk no fitaovana fitahirizana data matetika indrindra.Ny u disk dia tsotra, mora entina ary ny plug ary ny filalaovana dia mety ilaina amin'ny tranga maro sy fitaovana. Na izany aza, noho ireo toetrany ireo ny kapila U, dia misy olana indraindray ny U disk indraindray, ohatra, fa ny rakitra ao amin'ny kapila U matetika dia nanjavona tampoka ary nanjavona. Ny antontan-taratasy dia very. Matetika io toe-javatra io dia tsy mahazatra, fa tsy raikitra ny antony nahatonga an'io olana io.Ny mpamoaka lahatsoratra eto dia mamintina ireo antony marobe mahazatra ilazana azy.
Afenina io rakitra io: Avereno jerena ny toetoetran'ny kapila U ao anaty solosaina.Raha misy toerana misy habaka, nefa tsy aseho ilay rakitra, dia mety miafina ny rakitra.
Fahaverezan'ny rakitra: Betsaka ny antony mariky ny fahaverezan'ny data, toy ny famafana, fametrahana, otrikaretina solosaina sns. Raha hitanao fa very ny rakitra, ajanony avy hatrany ny asa fanoratana mba hialana amin'ny famoahana ny angon-drakitra very.
U disk dia tapaka: ny kapila U dia misy tsy fahombiazana ara-batana, toy ny fahatsiarovana fahatsiarovana, fanaraha-maso lehibe, sns.
Ny rakitra ao amin'ny kapila U dia tsy misy Fomba fanarenana iray: asehoy ny rakitra miafina, ny lahatahiry ary ny drive
Ity fomba ity dia mety amin'ny fahazoana rakitra miafina. Raha tsy miafina ireo rakitra nanjavona amin'ny kapila U, azafady mba jerena ny fomba 2 mba hamerenako ny fisie tsy hita; ity tutorial ity dia mampiasa ny rafitra Windows 10. Ny fandidiana manokana an'ny Windows dikan-ny rafitra hafa dia mety ho somary hafa kely, saingy mitovy ihany. Tsy ohatra ity ilay izy.
Ny dingana voalohany: mampifandray ny kapila U amin'ny solosaina, avy eo avo roa heny tsindrio ny "this computer" kisary ao amin'ny desktop ny hanokafana ilay mpandinika ny rakitra.
Dingana 2: Tadiavo ny taratasin'ny drive USB an'ny drive flash USB amin'ny mpitady rakitra ary tsindrio indroa ny taratasy mitondra fiara raha te hanokatra ilay USB flash drive.
Dingana 3: Tsindrio ny tabilao "Hijery" ao amin'ny fisakafoanana sakafo, ary avereno jerena ny safidy "zavatra miafina".
Tsy hita ny fisie ao amin'ny kapila U Fomba fanarenana 2: Ampiasao ny rindrambaiko fanarenana ny kapila U kapo ny hamoahana ireo rakitra very
Raha very ireo rakitra tao anaty kapila U. Raha tsy afenina azy dia mety ho voafafa tsy misy fotony.Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny manandrana mampiasa data recovery software ho fanarenana rakitra. Avy eo dia lasa ny rakitra U disk, inona ny rindrambaiko fanarenana data no tsara kokoa?
PreSolosaina fanarenana partition
NextFamerenana mahery vaika amin'ny alàlan'ny rakitra U disk